Ikhambi leSithiyo Sokuqala: Ukungabikho kwe-Mass
true study /zu-ZA/tools-for-life/study/steps/removing-the-first-block-to-learning.html read 3 8 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/study_zu_ZA.jpg UbuChwepheshe BokuTadisha
Ikhambi leSithiyo Sokuqala:
Njengoba kungewona wonke umuntu ofunda okuthile onayo i-mass yakho yangempela—njengogandaganda noma ama-apula—kuye kwenziwa amathuluzi awusizo wokulungisa ukuntuleka kwe-mass. Lezi ziza ngaphansi kwesihloko sokukhonjiswa.
Ukubonisa kusho isenzo sokukhombisa noma ukubonisa ukwenza okuthile kucace ukuthi into yenziwa kanjani noma isebenza kanjani. Futhi kusho ukufundisa noma ukubonisa ngokwenza okuthile.
Enye indlela yokunikeza i-mass nokusiza ukuhlela izinto ukwenza ukubonisa. Kunohlobo olulula kakhulu lokubonisa oluvame ukusetshenziswa uma kufundwa oluzokusiza ekutholeni ukulinganisa i-mass ne-significance yalokho okufundwayo. Lokhu ukusebenzisa i-demonstration kit.
1. DEMONSTRATION KIT
I-kit yiqoqo lezinto ezigcinwa ndawonye, ​​kaningi esitsheni esisodwa, ukuze zisetshenziselwe injongo ethile.
I-demonstration kit noma i-demo kit iqoqo lezinto ezincane eziningi ezinjengama-corks, izivalo zamabhodlela, ama-paper clips, izivalo zamapeni, amabhendi enjoloba, njll. Lezinto zisetshenziselwa ukukhombisa (bonisa) okuthile ukukusiza uthole ukuqonda.
Lezingxenyana ze-demo kit zivame ukugcinwa esitsheni futhi zilungele ukusetshenziswa ukukhombisa imicabango, amaqiniso, imithetho futhi ikhombisa nezincazelo zamagama. Eqinisweni, noma yini ingaboniswa kusetshenziswa i-demo kit.
Ungasebenzisa izinto nezinto nje kwi-demo kit etafuleni noma edeskini ukubonisa noma yini oyifundayo.
Empeleni injongo ye-demo kit ukubonisa ukuqonda.
Uma uhlangabezana nento ethile oyifundayo ohluleka ukuyithola kahle, i-demo kit ingakusiza ukuba uyithole kahle futhi uyiqonde. Ake sithi uyabona ukuthi kukhona uchungechunge lwezinyathelo zokwenza okuthile futhi akucaci kahle kuwe, ngakho-ke usebenzisa i-mass ye-demo kit ukuyixazulula.
Ake sithathe isibonelo esilula sento edinga ukwenziwa ongase udinge ukuyibonisa, njengokwenza inkomishi yetiye. Ungasebenzisa i-demo kit ukuthola i-mass futhi ikusize usebenze kahle izinyathelo. Ungahle:
Usebenzise isivalo sebhodlela ukumela iketela nebhendi yenjoloba ukumela amanzi angena eketeleni.
Sebenzisa ama-paper clips ukumela umlilo noma iphezu kwesitofu lapho ubeka khona iketela ukushisisa amanzi.
Sebenzisa izivalo zepeni ukumela inkomishi kanye ne-cork ukumela ithiphothi lapho ufaka itiye (usebenzisa enye into ekwi-demo kit).
Manje usungaphakamisa iketela emlilweni noma esitofini bese uthela amanzi netiye ethiphothini, uthele itiye enkomishini bese usebenzisa ezinye izinto ezivela kwi-demo kit, engeza ubisi noma ukhilimu kanye ne-sweetener.
Njengoba isithiyo sokuqala sokutadisha kuwu kungabikho kwe-mass, ukusebenzisa izinto ezibonakalayo ze-demo kit ukumela izincazelo ozihlelayo kungenye indlela yokwengeza i-mass oyidingayo ukuze uthole ukuqonda.
2. CLAY DEMONSTRATIONS
Ithuluzi elibaluleke kakhulu ekutadisheni noma isiphi isifundo ukusetshenziswa kobumba ukukhombisa okuthile. Kungaba yimibono, amaqiniso, imithetho noma kukhombise izincazelo zamagama noma iyiphi ingxenye yalokho okufundayo. Lokhu kubizwa ngokuthi “i-clay demonstration” noma “i-clay demo.”
Izinjongo kwe-clay demonstration yilezi:
1. Ukwenza izinto ezifundwayo zibe ezangempela kuwe ngokuzibonisa ngobumba
2. Ukukunikeza ibhalansi efanelekile ye-mass ne-significance
3. Ukukufundisa ukusebenzisa okufundile
Usebenzisa izandla zakho nobumba ukwenza amamodeli angamahodlwana wezinto, abantu noma izincazelo ozifundayo. Lokhu kwenzelwa ukuthola ukulingana okugcwele kwe-mass ne-significance nokuthola futhi uhlunge noma yini obunokudideka ngayo.
Ungasebenzisa imibala ehlukahlukene yobumba, kodwa imibala ayinazincazelo ekhethekile. Imibala isetshenziselwa kuphela ukukusiza ubone umehluko phakathi kwezinto, abantu nezinto ozenza ngobumba.
Noma yini ingakhonjiswa ngobumba. Akunamkhawulo kulokho ongakwenza futhi ukubonise nge-clay demonstration. Umkhawulo kuphela kungaba ukuntula kwakho ukuqonda.
Uma ungabonisa okuthile nge-clay demonstration uyakuqonda. Uma ungakwazi, awukuqondi ngempela ukuthi kuyini. Lapho wenza izinto nge-clay demo, empeleni kusiza ukuletha ukuziqonda lezozinto.
Ubumba lwakho kumele lukhombise isihloko olusimele. Akumelwe kube yisigaxa sobumba nje. Kepha ubuciko abunandawo kuma-clay demonstrations. Lokho okwenzayo ngobumba akudingeki kubukeke kukuhle. Izinto ozenzayo akudingeki ukuthi zifake imininingwane emincane. Bangaba amamodeli angamahle kangako ukumela izinto ozenzayo.
Kepha ama-clay demonstrations wakho kufanele abe makhulu.
Uma wenza ama-clay demonstrations amancane, uyobe ungasalandeli injongo yokuthi kungani uyenza ngobumba. Yi-mass yobumba ekusiza ukuba uqonde futhi uxazulule izinto. Imibukiso emincane ayinayo i-mass. Ukwenza izinto ezinkulu, abantu nezinto ezibonakalayo ekubumbeni kwakho kobumba kukunika i-mass eningi futhi lokho kuyingxenye ebaluleke kakhulu yalokho okwenzayo.
Konke okwenzayo ngobumba kufanele kufakwe ilebula futhi kufanele ufake ilebula ingxenye ngayinye njengoba uqhubeka. Ungenza amalebula ngeziqeshana ezincane zamaphepha noma ikhadi.
Awuzenzi zonke izinto bese ubuya uzobeka amalebula kuzo zonke. Uma uqeda ukwenza into uyiphawula ngelebula. Ngemuva kwalokho yenza into elandelayo bese uyiphawula ngelebula uqhubeke kanjalo. Kufanele ukwenze lokhu ukugcina ibhalansi ye-mass ne-significance njengoba uqhubeka njalo.
Uma usuyiqedile yonke i-clay demonstration, wenza ilebuli elilodwa elichaza ukuthi yonke iyini.
Uma kunomuntu okusiza ngesifundo sakho, ungambonisa, i-clay demonstration yakho, kepha ungamkhombisi ilebuli layo seyiphelele futhi ungasho lutho—vele umbonise ukuthi wenzeni. Ubheka nje ubumba lwakho bese ebona ukuthi luyini bese ekutshela. Ngemuva kwalokho umbonisa ilebuli lakho layo yonke into isiphelele.
Uma engabheka nje futhi aqonde isibonakaliso futhi abone ukuthi wenzeni ngobumba, ngaphandle kokuthi umchazele yona noma umbonise ilebuli layo seyiphelele, uyazi ukuthi ukubonisa kwakho kwenziwe ngempumelelo.
Ukwenza isibonelo, ake sithi udinga ukwenza i-clay demonstration yepensela. Ungenza umqulu omncane wobumba ukuze wemele umsizi kanye nobumba olungaphandle lobumba ukumela ukhuni, nomsizi omncane olunguze kancane ekugcineni. Ufaka ilebuli yomqulu omncane uthi “umsizi” bese ufaka ilebuli engaphandle “ukhuni.”
Wenza isilinda encane yobumba bese uyinamathisela ekugcineni okunye komqulu wobumba bese uyiphawula ngokuthi “irabha” noma “into yokusula.” Ngemuva kwalokho wenza ilebuli lento isiphelele elithi “Ipensela.”
Uma usuqedile nge-clay demonstration ungakhombisa omunye umuntu uma uthanda, ikakhulukazi umuntu osebenza nawe ukukusiza ngezifundo zakho. Kodwa okokuqala kufanele ususe ilebuli isiphelele, “ipensela,” ngaphambi kokuba ayibone. Lapho-ke, uma engabuka i-demo yakho bese ethi, “Ipensela,” uyazi ukuthi uyibonisile ngempumelelo ngobumba.
Ukukhombisa lapho okuthile kuhamba ngakhona kuvame ukuboniswa ngomcibisholo omncane owenziwe ngobumba bese kufakwa ilebuli lokuthi umele ini.
Lokhu kubalulekile ngoba kwesinye isikhathi i-clay demonstration ingaletha ukudideka uma ungakwazi ukubona ukuthi izinto zihamba kanjani noma ukulandelana kwento eyenzekayo.
Ukudweba yisenzo sokwenza umdwebo olula, osheshayo ongakhombisi imininingwane eminingi.
Ukudweba kubuye kube yingxenye yokubonisa futhi yinto ongayenza ukunika ibhalansi ye-mass ne-significance futhi ikusize ukwazi ukwenza izinto ngempumelelo.
Kunokuba uhlezi edeskini, uzama ukwenza okuthile noma ufunde okuthile ongakwazi ukukuthola kahle. Ungathatha ipensela nephepha bese uyadweba bese ukhona ukuyibamba kahle. Ake sithi ubufuna ukwenza ipulani noma okuthile kweshadi—ungenza umdwebo ukukusiza ukuthi icace kuwe.
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Isithiyo sokuQala sokuTadisha:
Ukungabikho kwe-Mass bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.